Hetsika famerenana omby halatra 329 Tsy nandoro tanàna izany ny zandary
Trano telo no may vokatry ny bala na “balles incendiaires” fa tsy nandoro tanàna ny mpitandro filaminana araka ny tsaho naelin’ireo mpiray tsikombakomba tamin’ny malaso, hoy ny zandary any an-toerana.
Ireo dahalo ambony latabatra mpandray omby halatra sy mpiaro ireo namany any an-kianja no nanapariaka ny vaovao tsy marina. Jiolahy dimy no maty, omby 329 tafaverina, ary basim-borona 4 sy basy poleta 3 no avotra. Ireo no vokatry ny fifanjevoan’ny zandary 60 avy ao amin’ny kaompanian’i Betroka izay nohatevenin’ireo miaramilan’ny zandarimariam-pirenena mpiady amin’ny dahalo na USAD. Tao Soahazo, Mangalahihy, kaominina Ivaho no nitranga ny sakoroka ny zoma tamin’ny 6 ora maraina teo. Toerana izay fanafenan’ny dahalo ireo omby halatra an-taonany maro ary tsy vaky raha tsy tamin’izao zandary 60 izao, araka ny tafa manokana tamin’ny tomponandraikitry ny kaompania. Vao teo am-pandaminana ny tetikady hidirana ny zandary dia nitifitra ireo dahalo ka izay no naharaikitra ny fifandonana.
Efa nogiazana ao Betroka ireo omby ary maro ireo voatafika no mahatsikaritra ny azy ao tahaka ny fianakaviana iray izay very omby fitopolo, efa an-taonany maro ka iray amin’izany sisa tazany ao. Manatona ny Fitsarana miaraka amin’ny taratasy fanamarinana ireo mpiompy mahatsikaritra ny ombiny ao ka ny tribonaly no manadihady sy mamoaka ny didy, mba hanjakan’ny mangarahara. Marihina fa mbola misy basy mahery vaika mas 36 lasan’ireo dahalo. Mbola andrasana any amin’ny faritra Atsimo ireo fiara vaovao izay natolotry ny fitondrana tamin’ny fetim-pirenena teo.